China Convex White Yellow Thermoplastic Road Marking Paint orinasa sy mpanamboatra |River Lake
Loko fanamarihan'ny lalana mavo mavo mivolombolafotsy
loko:White, Yellow, Dark Yellow, Orange, Blue
endri-javatra:Midina, tsy mitongilana
Ny loko fandrefesana lalana thermoplastic vibrating convex dia vita amin'ny resin-tsolika thermoplastic, pigment avo lenta ary additives.Ny fampiasana azy hanamarihana ny tsipika, ny loko thermoplastic marika marika dia manana tombony amin'ny fanamainana haingana, fananganana mora, taratry ny hazavana tsara ary fiainana maharitra.
Afaka mamokatra fenitra isan-karazany amin'ny loko marika marika thermoplastic isika, toy ny fenitra Shinoa (JT / T280-2004 sy GB16311-2009), fenitra BS, fenitra AASHTO, sns. Ny atiny sy ny akora dia samy hafa amin'ny fenitra samihafa.Afaka mamokatra araka ny mpanjifa tsy manara-penitra customization.
1. Ny fanoheran'ny fanerena ny loko Ny lokontsika dia manana fanoherana tsara amin'ny fanerena, mba hahazoana antoka fa ampiasaina maharitra kokoa.
2. Reflective vokany Araka ny fametrahana ny tahan'ny ny vera vakana, araka ny tokony ho marin-toerana refractive sy avo lenta coating karazana vera vakana amin'ny singa isan-karazany tahan'ny, mba hiantohana ny marika foana ho amin'ny fisaintsainana avo rehefa manatanteraka.
3. Haingana maina Mampiasà raikipohy samihafa hamokarana ny loko mifanaraka amin'ny mari-pana, ny hamandoana ary ny toetry ny arabe rehefa manatanteraka, miantoka ny hafainganana haingana sy ny fananana antifouling amin'ny marika.
4. Fahamarinana (Weatherability) Mifidiana fitaovana manta mazava tsara sy hafanana hafanana, mba hahazoana antoka ny loko sy ny famirapiratana maharitra na dia eo ambanin'ny tara-masoandro mahery aza.
Vakana fitaratra,% namboarina
teo aloha: Loko fanamarihan'ny lalana Thermoplastic White mavo mahazatra
Manaraka: Loko fanamarihan'ny lalana Thermoplastic namboarina Filipina
Thermoplastic Acrylic Resin Road Marking Reflective Paint
Pigment mavo fotsy ho an'ny lalana mafana mitsonika akora manta thermoplastic marika marika lalana
Masinina fandrefesana lalana thermoplastic entin-tena
Kiraro famantarana ny lalana